Qondanisa isenzi sesiFrentshi "Senza ngcono" (Ukuphucula)
Indlela yokudibanisa isenzi "Ukuphucula" (Ukuphucula)
Ukudibanisa okulula kwi-verb yesiFrentshi "Ukuphucula"
Ukuba ufuna ngokwenene "ukuphucula" isiFrentshi yakho, ngoko kufuneka ufunde isenzi sokuphucula , oku kuthetha "ukuphucula." Isenzi esivamile kwaye yenza kube lula ukudibanisa. Landela le sifundo sesiFrentshi uze udibanise uphuculo olufana nepro.
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi sokwenza ngcono
Isenzi sesenzi sesiFrentshi siyinkohlakalo ukubiza. Ngokuziqhelanisa, uya kufumana. Kuzwakala ngathi [i-lyuh ray]. Nangona ukubiza kuthiwa ngumceli mngeni, ukudibanisa akunjalo .
Kungenxa yokuba ukuphucula isenzi-esenziweyo rhoqo , ngoko kulandela iphethini esetyenziselwa izenzi ezifana nokuncedisa (ukunceda) kwaye wamukele (ukuba wamkele) . Uya kutshintsha nje ukuphela ngokwemiqathango esetyenziselwa zonke izenzi eziqhelekileyo.
Ukudibanisa ukuphucula , kufuneka uguqule ukuphela ukufanisa isichazi sesifundo - j ,,,,, etc, njl. - kunye nexesha lesivakalisi. Umzekelo, ukuba " Ndiyaphucula ," uya kuthi " jaméliore. "
Le tshathi iza kukunceda ufunde ukudibanisa kweendlela ezahlukeneyo zokuphucula . Iquka ikhoyo, ikusasa, ingaphelelekanga, kwaye ikhoyo ithatha ixesha. Kufuneka ujolise kwizinto ezikhoyo kunye nekamva kunye ne-passé compé ngezantsi.
phucula phucula phucula
amerires uphuculo phucula
phucula phucula phuculwa
Ukuthatha Inxaxheba Kwamanje Yokuphucula
Nje ngezinye izenzi zesiFrentshi, uphuculo lunokuthatha inxaxheba kwintetho , e- amélioant . Ngaphandle kokusetyenziswa njengesenzi, ingaba isichazi, i-gerund, okanye isibizo. Okubalulekileyo, iguqula igama ukusuka "ukuphucula" "ekuphuculeni."
Enye Ixesha Elidlulileyo Lokuphucula
I-passé compé yindlela eqhelekileyo yexesha elidlulileyo elisetyenziswe kwisiFrentshi.
Oku kwenza ukuba ukulungiswa kwakho kuphuculwe lula. Endaweni yokukhumbula zonke iifom ezingafezekanga, unako ukugxila kulo.
Ukuze wenze ibinzana ngokufanelekileyo, uzakufuna isenzi esincedisayo , esinalo kule meko. Kufuneka kwakhona ukwazi iqela elidlulileyo lokuphucula , eliphuculweyo .
Ngezo zinto, unokuthi "ndathuthukile." NgesiFrentshi, le nto " ndiyithucula. " Ngokufanayo, ukuba "siphucule," uya kuthi " siya kuphucula. " I " ai " kunye ne " tine " kule mizekelo yi-conjugates yesenzi.
Ukugqithiswa okungakumbi kokuphucula
Lezo zizinto ezilula kunye nezo oza kuzisebenzisa rhoqo. Kukho ezinye izenzi zento ofuna ukuba ubuncinane.
Cinga ukongeza iifom ezizimeleyo kunye neemeko kwizifundo zakho zesiFrentshi njengoko zibini zivakalisa isimo sengqondo kwaye zisetyenziswa rhoqo. Isimo sesigqibo sengqondo sichaza ukuba isenzi sinesimo esithile sokungaqiniseki. Isimo sengqondo esithintekayo sithetha ukuba isenzo siya kwenzeka kuphela phantsi kweemeko ezithile.
Iifomu ezilula kunye nezingapheleleko zokuzimela zingabalulekanga . Ezi zisetyenziswe ngokubhaliweyo ngokubhala ngokusemthethweni.
phucula ku phucula phucula phucula
amerires ku phucula phucula phucula
phucula phucula phucula phucula
phucula uphuculo phuculo ukuphucula
phucula phucula ukuphucula ku phucula
Uya kulufuna ukwazi olunye udibaniso lokuphucula kunye nelo ifom efunekayo. Oku kusetyenziswa kwizivakalisi ezimfutshane ezifuna okanye zicele into ethile. Ukwahlukana apha kukuba awukho mfuneko yokusebenzisa isichazi sesifundo. Esikhundleni sokuba " sithuthukise ," unokuthi " ukuphucula ."
Masisebenzise ukuphucula umxholo kunye nezivakalisi zesampuli.
Ndifuna ukuphucula isiFrentshi ngaphambi kokuba ndihambe. Ndifuna ukuphucula i-français ngaphambi kokuba uhambe.
Siza kwenza utshintsho oluthile ekhaya. Sithetha ukuphucula ikhaya lethu.
Unokuba unomdla kumagama afana nokuphucula njengoko oku kuya kuba luncedo ekuwandiseni isigama sakho sesiFrentshi.
kuphuculwe (idilesi) - ifaneleke
ukuphuculwa kwe-un-uphuculo, ukuphucula
ukuphucula (ukuchazela) - ukuphucula umhlaba
I-goûter - ukunambitha
Funda indlela yokudibanisa 'Ukuncedisa' (Ukuncedisa) Ngale Misebenzi elula
Imephu yeKharityhulam: Inkcazo, Injongo, kunye Neengcebiso
Into Omele Uyazi Ngolwimi lwesiCreole
Izindlela zokuvuna iziThuthi ezikhuthaza ukuhlaziywa kwamahlathi
"I-Harry Potter kunye ne-Deathly Hallows"
Inomic Mass and Number Mass Mass (Ukuhlaziywa ngokukhawuleza)
Kutheni Ukuqhekeza Iibhokhwe Zobhedu Kunzima Kangako